“Oral” “နှုတ်ဖြင့်” ဟူသော စကားလုံး၏ သမိုင်း (ပြောဆိုသောစကားလုံးများနှင့် ရေးသားထားသောစကားလုံးများ အကြောင်း) - Myanmar Network
“Oral” “နှုတ်ဖြင့်” ဟူသော စကားလုံး၏ သမိုင်း (ပြောဆိုသောစကားလုံးများနှင့် ရေးသားထားသောစကားလုံးများ အကြောင်း)
Posted by Betty on April 8, 2015 at 11:39 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
(တစ်နေရာတွင် ဤသို့ သုံးနှုန်းထားသည်။ သုံးစွဲထားပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။)
It'sacrazy market, the investors were told by the columnist, and they had to protect themselves. So they shouldn't accept "verbal assurances" that their fund managers were making the right decisions; they needed it in writing.
“ဒါ ရူးကြောင်ကြောင်နှင့် ဘယ်လိုမှ မှန်းဆလို့မရတဲ့ဈေးကွက်မျိုး” ဟု စီးပွားရေးသတင်းရေးသူများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပြောလိုက်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့သည် မိမိ၏အကျိုးစီးပွားကို မိမိဘာသာကာကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမည့် ငွေကြေးများကို စီမံခန့်ခွဲပေးနေသူများ (fund managers) များက မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များချ ပေးနေပါသည်ဆိုသော (verbal assurances) နှုတ်ဖြင့် ယုံကြည်ချက်ပေးမှုများကို လက်မခံသင့်ပါ။ စာနှင့်ရေးသားခိုင်းရန်လိုပါသည်။
(နောက်တစ်နေရာတွင် ဤသို့ သုံးနှုန်းထားသည်။)
A court in Tennessee, meanwhile, ruled that "an employee who made "an oral or verbal complaint against an employer" was protected against retaliation.
တန်နစီပြည်နယ်က တရားရုံးတစ်ခုက ဤသို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ “အလုပ် ခန့်အပ်သူအပေါ် နှုတ်မှဖြစ်စေ စကားလုံးနှင့် ဖြစ်စေ (oral or verbal) မကျေနပ်မှုဖော်ထုတ်သော ၀န်ထမ်းတစ် ယောက်” အားပြန်လည်ကလဲ့စားချေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးထားသည်။
အထက်ပါ စာပိုဒ်များ ဖတ်ပြီးသည့်အခါ verbal ဆိုသည်မှာ ပြောဆိုထားခြင်း(သို့) ရေးသားထားခြင်း ဘယ်ဟာကို ဆိုလိုပါသလဲ ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်တိကျမှုမရှိခြင်းကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။
“verbal” က်ို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါက “စကားလုံးများနှင့်ဖော်ပြထားသော” ဟု ဖွင့်ဆိုရမည်ဖြစ် သည်။ ၎င်းစကားလုံးများကို မည်သည့်ပုံစံနှင့် ဟူ၍တိကျစွာမဖော်ပြထားပါ။ အကယ်၍သင်က စကားလုံးများကို စက္ကူ (သို့မဟုတ်) ပိတ်ကား (သို့မဟုတ်)ကျောက်ပြားကြီးတစ်ချပ်ပေါ်သို့ တင်မိပါက “ရေးသားထားသော” ဟုဆိုရမည် ဖြစ်သလို အကယ်၍ ၎င်းစကားလုံးများကို နှုတ်ဖြင့်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါက ၎င်းတို့ကို oral (ပါးစပ်နှင့်ပြောဆိုထားသော) ဟုဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတန်းကျောင်း တွင် ပြန်ရောက်နေသကဲ့ သို့ပြုမူကြသည်။ ညစ်ညမ်းသောစကားလုံးအသံကိုပြုသော အချို့စကားလုံးများက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြုံးရယ်စေသောအခါ ထိုစကားလုံးမျိုးကို အဓိပ္ပါယ်လွဲ၍ ဖွင့်ဆိုခံရမှာကြောက်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားတတ်ကြသည်။
ဤ အတွက်ကြောင့်ပင် စာရေးဆရာများစွာ သည် နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုသောဟုသုံးရမည့်နေရာတွင် “oral” ဟူသောစကား လုံးကိုရှောင်ရှား၍ “verbal” ဟု အစားထိုးရေးသား ဖော်ပြကြပါသည်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုသုံးရန်လက်တွန့်နေရသလဲ ဆိုတာ ရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။ ပြောကြစတမ်းဆိုလျှင် ကောလိပ်များတွင် နှုတ်နှင့်ဖြေဆိုရသောစာမေးပွဲကို “oral exams” ဟုသုံးသည်။ ဘာမှ ပြဿနာမရှိပါ။ ဆရာဝန်များကလည်း ပါးစပ်နှင့်အာခေါင်တွင်းခွဲစိတ်ကုသမှုအထူးပြုဟု ကြော်ငြာရာတွင် “oral surgery” ဟုလူသိရှင်ကြား ကြော်ငြာကြသည်။ တရားရုံးများတွင် “နှုတ်ဖြင့်ငြင်းခုံထွက်ဆို ခြင်း” ကိုကြားနာသည်ဟု သုံးရာတွင် “oral arguments” ဟုသုံးရာတွင် မည်သူ့ကိုမှ မရယ်ပြုံးစေပါ။
ပြီးတော့ပိုမို ပြီးရှုပ်ထွေးစေသည်မှာ လူများစွာ (native speaker များ အပါအဝင်) တို့သည် “verbal” ဆိုသည်မှာ “ရေးသားထားခြင်း”ကို ဆိုလိုသည်ဟု နားလည် တတ်မြောက်ခဲ့ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အားကစားမှာဆိုလျှင် ကောလိပ်အားကစား သမားများက ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက် လာကစားကြလျှင် နှုတ်ဖြင့် သံဓိဌာန်ပြုကြသည်ကို “verbal commitment” ပြုကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုပင် ဤသို့ပြုခြင်းကို “verbal”လုပ်ကြသည်ဟု “verbal” ကို noun ပုံစံပင်သုံးကြသည်။ (အင်္ဂလိပ်စာတွင် “verbals”ကဲ့သို့လက်ခံ၍ရသော nouns များမှာ- gerunds ဟုခေါ်သော V-ing ပုံစံများ၊infinitives ဟု ခေါ်သော to+V1 ပုံစံများနှင့် participles ဟုခေါ်သော Verb တွင် -ed (သို့)-ing ပေါင်းသော ပုံစံများရှိပါ သည်။) အကြိမ်အနည်းငယ်တွင် ဤ “verbal” ဆိုသောစကားလုံးကို verb အနေနှင့်ပင်သုံးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ “He has verbaled to Cornell” (ကော်နယ်(လ်) တက္ကသိုလ်သို့လာကစားရန် နှုတ်ကတိပြုလိုက်သည်။) ဤသို့ သုံးတာကို အကြိမ်နည်းသော်လည်း မကြာခဏတွေ့ရသည်။
ဒီတော့ အားကစားသမားတွေဟာ တစ်စုံတစ်ခုမှာ ဆိုင်းထိုး ပေးလိုက်ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် “oral” နှုတ်ဖြင့် ဂတိပေးပြီးရုံဘဲလား။ ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိရခြင်းက အရေးကြီးလှပါတယ်။ အထူး သဖြင့် မျက်မှောက်ကာလလို သိက္ခာကျစရာကိစ္စမျိုး မျိုးစုံဖြစ်ပျက်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့။ “oral” (နှုတ်ဖြင့်) ဟူသောစကားလုံးနေရာတွင် “verbal” (စကားလုံးဖြင့်) ဟုသုံးစွဲနေသူများလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေသဖြင့် Garner’s Modern American Usage (ဂါနာ၏ ခေတ်ပေါ် အမေရိကန်အသုံးအနှုန်း)စာအုပ်တွင် ဤကဲ့သို့သုံးနှုန်းခြင်း အား ဘာသာစကားအပြောင်းအလဲ အညွှန်း၏ အဆင့် ၄တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤ သို့သုံးနှုန်းခြင်းသည် အစွန်းထွက်တရားသေသမားများမှလွဲ၍ အားလုံး အတွက်သင့်လျှော်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂလိပ် စာပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤသို့ရှိတာတောင်မှ “oral” ဟူသောစကားလုံးမသုံးရန် အကြောင်းရင်းဟူ၍ မရှိပါ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်မှု ပုံသဏ္ဍာန်ကအရေးကြီးသော ကိစ္စများတွင် ၎င်းကိုသုံးခြင်းက ပိုမို၍ ကြိုက်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ Garner’s ဂါနား(စ်)၏စာအုပ်ထဲတွင် ပြောထားသလိုပါဘဲ။ “အကယ်၍သင်သည် “oral” ဆိုသောစကားလုံးကို ကျဉ်းမြောင်းသော လိင်ကိစ္စနှင့်ဆက်နွယ်သည့် အဓိပ္ပါယ်မျိုးနှင့်သာ ဆက်စပ်စဉ်းစားတတ် သည်ဆိုပါက သင်၏ ပါးစပ်ကို ဆပ်ပြာနှင့် ချက်ခြင်း ဆေးထုတ်လိုက်ပါ။ မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြီးပြည့်စုံမှုရှိပြီး ကောင်းမွန်လှသော စကားလုံးတစ်လုံးကို ဆုံးရှုံးရတော့မည့် အန္တာရာယ်သို့ ရောက်ကောင်းရောက်နေလိမ့်မည်။
သို့သော် အကယ်၍သင်က ဆက်လက်ပြီး “oral” ဟူသောစကားလုံးကို မဖြစ်မနေ ရှောင်ရှားချင်တယ်ဆိုပါက လွယ်ကူသောထွက်ပေါက်လမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ပါးစပ်မှ ထွက်လာသည်ဟု သုံးလိုပါက “spoken” ဟူသော စကား လုံးကိုသုံးပါ။ သင်စာလုံးပေါင်းရသည်ဟု သုံးလိုပါက “written” ဟုသုံးစွဲလိုက်ရုံသာ။ ဒီလောက်ဆို ရှင်းပါပြီနော်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by htaylim on February 11, 2016 at 21:00